IBlack Shark 2 Pro sele inomhla wokumiselwa ngokusemthethweni | I-Androidsis
IBlack Shark 2 Pro sele inomhla wokumiselwa ngokusesikweni
Kwiiyure nje ezimbalwa ezidlulileyo, I-Geekbench ichaze ezinye zeempawu kunye neenkcukacha zobuchwephesha ze «blackshark DLT-A0», igama yikhowudi engqinelanayo ne I-Black Shark 2 Pro. Esi sixhobo siza kuphehlelelwa kwaye, ngaphambi kokuba yenzeke, isibhengezo esiqinisekisa umhla wayo wokufika awukenziwa, otyhilwe nguXiaomi okomzuzwana nje odlulileyo njengamaqebengwana ashushu.
Ipowusta yokwazisa yale smartphone midlalo siyibonisa apha ngezantsi. Apho ungabona ezinye iinkcukacha, kodwa, ngaphambi kokuchaza zonke, kufuneka kuqatshelwe ukuba inokubaxhobisa iQualcomm SoC entsha, Lowo ubonisiwe kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo.
Le yeyona poster-yeti yokuqala ekhutshwe ngumenzi waseTshayina weShark 2 Pro. ayichazi naziphi na iimpawu okanye iinkcukacha zobugcisaisixelela ukuba nge-30 kaJulayi, usuku olungaphantsi kweeveki ezimbini kude, le mobile yokusebenza ephezulu iya kwenza ngokusemthethweni.
I-Black Shark 2 Pro esemthethweni yokuSungulwa
Igama lesixhobo liseTshayina, kunye nezinto ezininzi ezichazwe kuyo. Nangona ingasiniki enye into ngaphandle komhla wayo, ixesha kunye nolwalamano olunalo nesiphelo, nto leyo icace gca, siyazi ukuba le izakubetha kwimarike ngemisebenzi emininzi kunye nemidlalo ebhetele kunye neempawu kunabo sifumana sele sazi Black Shark 2, ekhutshwe ngo-Matshi walo nyaka.
I-Black Shark 2, uhlalutyo kunye novavanyo lwe-terminal yokudlala ngokugqwesa
IBlack Shark 2 Pro iya kuhamba nayo entsha Snapdragon 855 Plus, I-SoC efikelela kwinqanaba lewotshi ephezulu ye-2.96 GHz kwaye ijolise kwicandelo lokudlala elihambayo. Ukongeza, kukho intetho yokuba inkqubo yokupholisa i-hybrid iya kuba noxanduva lokugcina izinto zihlala zibanda. A I-27-watt ibiza ibhetri ngokukhawuleza yenye yeempawu ezivuzayo zale smartphone.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IBlack Shark 2 Pro sele inomhla wokumiselwa ngokusesikweni
Gcina i-Oukitel Y4800 entsha nge- $ 199 nje
Tshabalalisa abanye ngemoto yakho eyenziwe nguwe kwiMinecraft Imoto Machaca